Ogaden News Agency (ONA) – LALIBELA – Jabhadda EUFF oo qarxisay bus ay saarnaayeen madaxda EPRDF ah
LALIBELA – Jabhadda EUFF oo qarxisay bus ay saarnaayeen madaxda EPRDF ah
Posted by ONA Admin	/ January 10, 2013
Wararka ka imanaya Waqooyiga Itobiya oo dhaq-dhaqaaq xoogan uu ka bilowday ayaa sheegeen in lagu dilay tobanaan ka mid ah madaxdii Xisbiga loo yaqaano ANDM ee ku jira Isbahaysiga EPRDF kana socda qawmiyadda Amxaarada. Shabakadda (Ethiomedia) oo warkan soo tabisay ayaa raacisay sidoo kale inuu jiro dhaawac badan. Dilka nimankan ayaa ka sababay ka dib markii miino lagu qarxiyay bus ay saarnaayeen oo ah kuwa 45ka qof qaada. Nimankan ayaa doonayey inay ku tagaan magaalada taariikhi ah ee Lalibela.
Hawlgalkan waxaa fuliyey maalintii Talaadada ahayd jabhadda Amxaarada ee EUFF. Nin ka mid ah jabhadaa oo la soo xidhiidhay warbaahinta ayaa sheegay in dadka lagu qarxiyay baska ay dhamaantood ahaayeen madax EPRDF- oo ka soo noqday damaashaadkii sanadka cusub ay ku tageen magaalada Bahirdar oo ku taala xadka u dhexeeya labada dagmo ee kala ah Lasta iyo Gayint.
Jabhadda EUFF waxay uga digtay dadka shacabka ah inay raacaan basaska ay madaxda EPRDF fuulaan, kuwaasoo ay sheegeen inay qarxinayaan.
Jabhadda EUFF (Riix Halkan) ayaa dhaq-dhaqaaq iyo hawlgalo xooga ka bilaabay Waqooyiga Itobiya iyagoo meherado badan oo xisbiga EPRDF/TPLF uu ku lahaa degmooyinkaa qarxiya ama guba. Qawimiyadaha daga Waqooyiga Itobiya ee Amxaarada iyo Tigreega oo horey u aaminsanaa in sanduuqa doorashada looga adkaado xisbiga EPRDF ee talada dalka Itobiya xoogga ku haysta ayaa hadda ogaaday inay arintaasi ahayd dhalanteed, ka dib markii uu ururka TPLF si cadaan ah ugu sheegay in xukunka ay ku qabasadeen xabad kagana tagayaan un xabbad.
Wararka ku saabsan hawlgalada jabhadda EUFF – Riix Halkan.